ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ – AnZarTone
Category Archives: ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ
Standard | Posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ	|0comments
တစ်နေ့သ၌ လွန်စွာမှ ဝဖိုင့်သော လူကြီးတစ်ဦးနှင့် လွန်စွာမှ ပိန်ညှောင်သော လူကြီးတစ်ဦးတို့သည် ကျဉ်းမြောင်းလှသော တစ်ယောက်သွား လမ်းကြပ်လေးအတွင်း ရင်ဆိုင် တိုးမိကြလေ၏။
ထိုအခါ လူဝကြီး မှ …..
ဟေ့ကောင် နံပိန်၊ ဘေးကို ကပ်စမ်း
– ဟူ၍ အမိန့်ဆန်ဆန် လေသံဖြင့် ဆိုလေရာ လွန်စွာမှ ပိန်ညှောင်သော လူပိန်ကြီးမှ ခပ်မာမာ လေသံဖြင့် ဤသို့ ခွန်းတုံ့ပြန်လေ၏။
ဟေ့ကောင် ဝက်ကြီး၊ မင်းသာ ထိုင်လိုက်စမ်း၊ ငါ မင်းအပေါ်က ကျော်ခွသွားမလို့
ထို့နောက် ၎င်းတို့ နှစ်ယောက်သည် ဤသို့ အချေအတင် ပြောကြလေ၏။
လူဝကြီး – “ဘာကွ၊ မင်း နံရိုးတွေ ကျိုးချင်ပြီ ထင်တယ်”
လူပိန်ကြီး – “အောင်မာကွာ၊ မင်း ဝက်ကင် ဖြစ်သွားချင်လို့လား”
လူဝကြီး – ((ဟက်ဟက်ပက်ပက် တစ်ချက် ရယ်လိုက်ပြီး))
“အဟက် …၊ လူကြည့်တော့ဖြင့် ငါ့ တစ်ချက်ထိုးစာတောင် မရှိဘူး၊ လက်သီးနဲ့ ပြောတာနော် ကိုယ့်လူ … အဟက် .. ဟက်”
လူပိန်ကြီး – ((လွန်စွာ ဒေါပွသော မျက်နှာပေးဖြင့်))
“ဟေ့ကောင် ဝက်ကြီး၊ ဗလ တော့ မရှိဘူး၊ ဇ တော့ ရှိတယ်ကွ၊ နားလည်လား။ ခါးပတ်နက်တောင် ရထားတဲ့ ကောင်ကွ။ ဘာမှတ်နေလဲ”
ထိုအခါ လူဝကြီးမှာ လူပိန်ကြီးအား ရီကျဲကျဲ မျက်နှာပေးဖြင့် ခေါင်းမှစ၍ ခြေဖျားဆုံးထိ သေချာစွာ ကြည့်လိုက်ဟန် ပြုပြီးနောက် ….
မဟုတ်မှ လွဲရောပဲ၊ မင်း ရတဲ့ ခါးပတ်နက်ဆိုတာ မင်း မိန်းမ ထမီက အထက်ဆင် အနက်စကြီးပဲ ဖြစ်ရမယ် .. ဟီဟိ
– ဟူ၍ ခပ်ထေ့ထေ့ ပြောလိုက်လေရာ လူပိန်ကြီး၏ မျက်နှာမှာ ဒေါသကြောင့် လွန်စွာမှ နီးမြန်းသွားပြီးလျှင် …. ခါးကြားတွင် အသင့်ဆောင်ထားသော ဓါးကို ထုတ်ယူကာ လူဝကြီး၏ ဝမ်းဗိုက်ဆီသို့ ဦးတည်၍ အားကုန် ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့၏။
မည်သို့ မည်ပုံ ဆက်ဖြစ်ကြသနည်း ဟူမူကား ??????
စာရှုသူ အသင်လူသားတို့၏ သဘောသာလျှင် ဖြစ်ချေတော့သည် တမုံ့ ……။
(( …. သို့တည်းမဟုတ် အခါအခွင့် သင့်သည့်အားလျော်စွာ တင်ဆက်ပေးသွားပါမည့် အကြောင်း …. ))
ဘ ဘာ ဘား ဘိ ဘီ ဘီး
နောက်ဆုံး ကဗျာ ……။
နောက်ဆုံး ကဗျာ ….။
ကမ္ဘာမှာ နေသာတဲ့ တစ်နေ့ …
“သူမ” ကို စတင် တွေ့ခဲ့ရသည် …
မြင်မြင်ချင်း ချစ်ခဲ့မိပါသည် ……….။
ရင်ထဲမှာ မိုးချိန်းသံတွေ ကြားရတဲ့အချိန်က
စည်းချက် မညီတဲ့ နှလုံးသားနဲ့
သူမ ထံ ချစ်သဝဏ်လွှာ ပါးခဲ့သည် ……။
လေနုအေးလေး တိုက်ခတ်တဲ့ နေ့က
သူမနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည် ….
ဇွန်းတပ်ပြီး ပျော်ခဲ့သည် ……။